Bangaphezu kuka-50 izinhlobo of calculation. Ukubalwa isisekelo strip, ubukhulu imishayo, izitebhisi ngokhuni. Building wokubala.
Izibalo zokwakha, ukwakhiwa yokubala, futhi abaklami
Ezicijile, izindonga, iphansi
Umqulu kanye umthamo
Ukuphishekela ukwakhiwa indlu luhlaka Ngihlale sibhekene izibalo semali zokwakha noma ukubala ubungako imininingwane design esithile.
Ukuphuca ibhodi, lezigodo noma ezinye lezigodo ukwakhiwa - njengoba adingekayo izindonga noma phansi?
Heaters futhi zidinga izibalo njalo. Ingabe lokhu bezimvu amaminerali, Foam noma ezinye ukwahlukanisa. Njengoba mina wabhala, design endlini Uhlaka ukwahlukanisa izinto zami ngisebenzisa for ukwahlukanisa, hhayi kuphela phansi nophahla, nezindonga.
Roofing - kungenye indaba. The kophahla lwendlu eziyinkimbinkimbi yami bobunjwa, futhi abale inani metal shingles noma ezinye izinto yophahla kunzima. Kanti kubalulekile acabangele udoti in yophahla. Ngakho kuba indlu iminyaka eminingana enophahla of yophahla impahla.
The isizini elandelayo, ukuba abami ezindongeni. Futhi acabange ukuchema, barrier umhwamuko ...
Umuntu ujwayelene mfundo algebra, ngeke kube nzima lezi izibalo. Thatha iphepha kanye wokubala, khumbula formula, uhlole izikhathi ezimbalwa ... Futhi hlola ... Ukuze izibalo kungukuthi amaphutha ngokunyenya igcwele izindleko ezingenasidingo. On ezokuthutha, uma une into ukuthenga more, noma okuphambene nalokho on kakhulu, kulula ukuyisebenzisa, futhi, akukuhle kakhulu, nokunye.
Ngakho wazalwa umqondo kudlule la izibalo isimiso emahlombe izinhlelo bonke sizodingida bese udweba umdwebo.
Futhi okubaluleke - musa ukwenza amaphutha! Phela, izindleko ukwehluleka uphakeme kakhulu ngesikhathi kwakhiwa.
Ngithemba ukuthi inkonzo yami kuzosiza labo ukwakha indlu ngezandla zakhe futhi onjiniyela-abakhi.